FALANQEYN KOOBAN: Puntland maka faa’iideysan doontaa Taageerada iyo Xariirka siyaasadeed ee ay la leedahay Imaaraatka Carabta, Maxayse uga dhigan tahay M/weyne Gaas? – Puntlandtimes
FALANQEYN KOOBAN: Puntland maka faa’iideysan doontaa Taageerada iyo Xariirka siyaasadeed ee ay la leedahay Imaaraatka Carabta, Maxayse uga dhigan tahay M/weyne Gaas?
April 21, 2018 W LAASCAANO
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuu maanta ka socdaalayaa deegaanada uu maamulo, isagoo ku sii jeeda dalka Imaaraatka Carabta, waana booqashadii ugu horeysay tan iyo markii ay banaanka u soo baxday xariir-xumada siyaasadeed ee udhaxeysa dawladda Faderaalka Soomaaliya & Imaaraatka Carabeed, waxaana Puntland ay qaadatay go`aan ka gedisan midkii ay qaaday dawladda Faderaalka ee ay katirsan tahay.
Madaxweynaha Puntland shir jaraa’id oo uu ku qabtay Boosaaso todobaadkii na weydaartay wuxuu ku cadeeyey in mawqifkoodu uu yahay in aan Imaaraatka laga maarmin, halka Xukuumadda Muqdisho ay cadeysay in ay ka maarmaan taageerada Milateri iyo mid caafimaad ee ay bixinaysay Xukuumada ABU DHABI.
Imaaraatka waxay gacanta ku hayaan ciidamo tiro ahaan lagu qiyaaso 2000 Askari, kuwaas oo kusugan inta badan dhulka xeebaleyda Puntland iyo jidaha dagaalka ee ay isku horfadhiyaan Al- Shabaab & Daacish, taasna waxay kaliftay in aysan Puntland marnaba ka mid noqon Karin xulufada dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa is weydiinaya Puntland maxay tahay doorka uga furan in ay faa’iido wanaagsan ka keento cilaaqaadka cusub ee ay la leedahay dawladda Imaaratka Carabta, waxaana la rumeysan yahay in kasokow dekeda iyo tababarka ciidamada Badda ay jiri karaan heshiisyo cusub oo dhabaha u xaara isbedel wanaagsan.
Madaxweyne Gaas oo ah dhaqaale-yahan inta badan maanka ku haya arrimaha Kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland ayaa hadda wajahaya xifaaltan siyaasadeed oo adag, booqashadiisa Imaaraatka waxaa laga filan karaa in uu qaado talaabo wanaagsan oo uu Imaaraatka ka helo taageero xoog badan ama in uu noqdo mid ku hungooba safarkiisa.
Imaaraatka ayaa laga yaabaa in ay sameeyeen kudilid siyaasadeed oo ah in ay mashaariic waa weyn oo ay balan-qaadaan, gaar ahaana Wadooyin cusub oo Laami ah, Goob Suuq Xor ah, kor u qaadida Tababarada ciidamada iyo agabyada Milateri ee ay u baahan tahay Puntland.
Laakiin caqabadaha taagan ayaa ah kuwa aan wali xal rasmi ah loo heli doonin, gaar ahaana P&O oo qeyb ka ah DP WORLD ayaa maamusha Dekeda Boosaaso, mana jirto ilaa hadda oo sannad ka soo wareegtay wax ay ka qabatay marka laga reebo in ay wali wado Naqshada diyaarinteedii, mana jirto in ilaa hadda la baahiyey Qandaraaska dhismaha marsada magaalada Boosaaso.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegaya in ay meel wanaagsan marayaan mashruuca dhismaha deked cusub & balaarinta Dekeda Boosaaso, waxaana uu sheegay in dhawaan la shaacin doono Tartanka Qandaraaslayaasha oo ay ku jiraan shirkado laga leeyahay dalka Shiinaha oo loo badinayo in ay qaadan doonto mashruucan.
Falanqeeyaashu waxay leeyihin tanni waa fursad cusub oo soo garaacday Albaabka Puntland, laakiin in laga faa`iideystaa waxay ku xiran tahay Madaxda Puntland ee maanta iyo sidda ay iskugu wadaan dhinacyada is khilaafsan ee doonaya in ay hardan adag oo siyaasadeed dhexda u galayaan hadba qoladii ay la socdaan.
Long live Puntland -UAE RELATIONSHIP forever
Wax ba dani uguma jirtu punti land
haka faa iidaysato puntland waa fursad dahabiyee
madaxweynaha puntland wuu yaqaana fursada siyaasadeed